ပဲပုပ်သန့်ရှင်းရေးစက်သည်ပဲပုပ်များကိုဖွဲ .gr မှ ခွဲ၍ စက်ဘောင်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်,4သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘီး,ကားမောင်း,ပလက်ဖောင်းလှိုင်းလေဆွဲ,အကြမ်းပန်ရန်, လေထုစုတ်ယူခြင်းပြွန်, မျက်နှာပြင်စစ်ဆေးခြင်း။ ပဲပုပ်သန့်ရှင်းရေးစက်ကိုရွေ့လျားရန်အဆင်ပြေသည်။ မျက်နှာပြင်ကိုအစားထိုးရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ လေသန့်ရှင်းရေးစနစ်ဖြင့်အညစ်အကြေးများကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။. ထိုအခါကျန်ရှိသောပစ္စည်းများသည်တုန်ခါနေသောဆန်ခါမျက်နှာပြင်တစ်ခုစီသို့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်.
ပဲပုပ်သန့်ရှင်းရေးစက်တွင်ဂျုံအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, အမှု, ပြောင်းဖူး, ကောက်, ပဲ, Oats, ခေါ, Millet, နှမ်း,
နေကြာစေ့, ငရုတ်သီးစိမ်း, ပဲလေး, ဇီနှင့်စပါး, နှင့်အခြားပန်းပွင့်အစေ့သို့မဟုတ်မြက်အစေ့.
ပဲပုပ်မျိုးစေ့သန့်ရှင်းရေးစက်သည်ဂျုံနှင့်ဂျုံကဲ့သို့သောစပါးမျိုးစေ့များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင့်ကျက်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ခါဆန် / ခွဲ / စစ်ဆေး / ခွဲခြားစက်ဖြစ်သည်။, မုယောစပါး, ပြောင်းဖူး, ပဲ, စပါး, ဝါဂွမ်းအမျိုးအနွယ်နှင့် camellia. ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်,ခြွေလှေ့သို့မဟုတ်အခွံ,
ကောက်ပဲသီးနှံများအတွင်းကောက်ရိုးအညစ်အကြေးများသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းသောသို့မဟုတ်ညစ်ပတ်သောအရာအချို့ရှိသည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ HYL-25 သည်အဓိကအားဖြင့်ဆွဲအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်သုံးဆကိုလေမှုတ်စက်စနစ်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်စပါးစေ့များကိုသန့်ရှင်းစေရန်ညစ်ပတ်စေသောအညစ်အကြေးများကိုခွဲထုတ်နိုင်သည်။. သန့်ရှင်းရေးနှုန်းဖြစ်နိုင်တယ် 98%.